Used Car Toyota Belta 2010 motor car for sale in Myanmar market . ca129
Car Events & Special Offers Car Reviews Car Centers Comment Contact Login Create Account Forgot Account
<< All Cars For Sale
Car Id: ca129
Toyota Belta , 2010 used car for sale in Myanmar.
current price = 217 MMK Lakhs
1.3 Liters Engine
Hire Purchase (Not Available )
01 - 30 Sep 2020
Toyota Majesty 2020
Toyota Sept Promotion 01 - 30 Sep 2020
Toyota Mingalar One Stop Services Center အမှတ် (၂၃၆)၊ အလုံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ် Hotline: +95-9405399993 ဖုန်း 01 – 221224 ၊ 01 – 2302122 ၊ 01 – 2302123 ၊ 01 – 2302126 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
Post Shared: 17 June 2020
The Premium Class Toyota Majesty 2020
SUV Type Rush နဲ့ Fortuner ကို ဝယ်ယူချင်တဲ့ Customer များအတွက် Live Review
'Toyota Kluger' ကို 'Toyota Highlander' ဟုလည်းလူသိများသည်။ထိုင်ခုံ ၇ ခု။
Toyota Kluger Awards (toyota kluger ဆုများ)
2019 Toyota Highlander Is an IIHS TSP .
2019 Toyota Highlander Received the NHTSA 5-Star Overall Safety Rating
New member to the Toyota Corolla Series. Corolla Cross isacompact size SUV front wheel drive(FWD),5seaters, ,1.8 L engine. It's another alternative to C-HR. Corolla first revealed itself in Japan 1966, and since then sold over 150 countries worldwide.
Toyota Aye and Sons - TTAS Co., Ltd. Myanmar (Dealership / Service)
JPM ( Toyota cars ) >> Ko Pyae Phyo ( Toyota cars ) >> Ruby ( Toyota cars ) >> Toyota Mingalar ( Toyota cars ) >>
Nyan cars >> Top Views >>
Extra Information , Specifications, or features
-Weight 1030 Kg + 4P
-License valid up to 31-May-2020
-License Plate Number:3D/1591
- ရွဳ မႊဳင္း ဆို ဖာ ခံု
ဒီကားကို (၅-၃-၂၀၁၂)မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ယိုကိုဟားမားမြို့ရှိ နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးရဲ့ အမျိုးသမီး က ဘယ်လ်တာကားအစား အခြားဒီဇိုင်းကို စီးခြင်လို့ ကားပြန်ရောင်းချင်ကြောင်း ဂျပန်ရောက် မြန်မာ မိတ်ဆွေတစ်ဦးနဲ့ ဆက်ပြီး၊ဝယ်ဖြစ်သွားတာပါ။ဝယ်စကကီလိုမီတာ(၃၂၀ဝ)ကျော်ပဲ၊စီးရပါသေးတယ်။ ကားရဲ့ ဂရိတ်က ၆-အေ/အေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကို (၅-၄-၂၀၁၂)ရက်ရောက်တာမို့၊ (၃-၄-၂၀၁၂)နေ့ နောက်ပိုင်းတင်သွင်းကားတွေကို အကောက်အခွန်ဌာနက စီအိုင်အက်ဖ် ၁၀ဝ% က နေ ၅၀%အထိလျော့ချကောက်ခံတာကြောင့် သိန်း(၂၀)ကျော် သက်သာသွားပါသေးတယ်။ ‘ဒါတောင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဆရာများဆောင်အရောက် ကျပ်သိန်း(၂၅၃)ကျော် ကျပါ တယ်။ ကားကို ထိခိုက်မိမှာ စိုးရိမ်လို့ ဒေါ်လာ(ယိုယိုဖီးစ် ၉၀ဝ)လောက်ကုန်ရမယ့်အစားဒေါ်လာ (ကွန်တိန်နာခ ၁၇၀ဝ+လက်ချင်ဖီးစ် ရ၀ဝ=၂၄၀ဝ)လောက်သုံးပြီး၊ကွန်တိန်နာ တစ်လုံးတည်း တစ်စီး သီးသန့် တင်သယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကားကို ဟိုက်ဝေးမသွားသလို သုံးနာရီ၊လေးနာရီဆက်တိုက် သုံးစွဲတာမျိုးလည်းရှောင်ကျဉ်ပါတယ်။ ကုန်ဆိုလို(၂၄ပြည် ဆန်တအိတ်ထက်ပိုလေးတာမျိုးမတင်ပါ။ သီးခြား တက္ကစီနဲ့ပဲသယ်ပါတယ်။တယောက်ထဲ လူစီးသက်သက်မို့ ကားအင်ဂျင်ပိုင်းပြဿနာ မရှိပါ။ ဆီကိုလည်း အောက်တိန်း၉၅ကိုပဲ၊ အမြဲသုံးသလို ဆီဆိုင်ကိုလည်း မြမေတ္တာမွန်ဆီဆိုင်တစ်မျိုးထဲမှာပဲ အထည့်များပါတယ်။ မူလကားတွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းအားလုံးသိမ်းထားပါသည် အားလုံးပြန်ထည့် ပေးပါမယ်။ ဈေးများများလျော့ မရောင်းလိုပါ။ မရောင်းရသေးလည်း တစ်လက်ကိုင်မို့ ဆက်လက်သုံး ဖို့ ရည်ရွယ်သလို၊စီအာဗွီလို ဖရိန်အမြင့် ပြောင်းစီးလိုစိတ် ပေါ်လာလို့ရောင်းဖို့စိတ်ကူးတာပါ။ ကြိုက် ဈေးဖြစ်ယင်တော့ ရောင်းမယ်ပေါ့။ ကားတင်သွင်းသူအမည်က တူတော်မောင် သင်္ဘောအရာရှိမို့ သူအ ခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ငွေနဲ့ ဦးလေးအတွက်ဆိုပြီ သူနာမည်နဲ့မှာပေးထားတာပါ။ အားလုံးအရှုပ်အရှင်း ကင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာမှု ပေးမယ့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်မည့်သူဟာ ငွေကြေးတတ်နိုင်လို့ ဈေးမစစ်ပဲ ဝယ်တိုင်း မရောင်းပါ။ ပေါက်တတ်ကယ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်သူမျိုးရောင်းမည်မဟုတ် ပါ။ ကားကို သံယောဇဉ် ရှိနေပြီမို့၊ အိမ်စီးသက်သက်စီးမည့်သူများကိုသာ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရောင်း ပါမယ်။
Toyota is Japanese car manufacturer main based in Toyota, Aichi, Japan, founded by Kiichiro Toyoda in 1937. At 2018, it's the second largest car seller just behind volkswagaen. As of December 2019, toyota ranked tenth-largest company worldwide in terms of revenue . At 2012, It reached its highest mark ,10 million cars per year .
Seller Name = Nyan
Emails(s) = nyanhtun08@gmail.com
Phone(s) = 09-5009017 , 09965009017 , 09799840445
Free car sales, car rental, car accessory sales advertisements
motorcarmyanmar isafree online cars advertising, listing, and information provider in Myanmar.
+95 - 9799840445
Contact motorcarmyanmar >>
Disclaimer:We don't promote and don't hold responsibility for misinformation or misleading car ads posted by individual users (although we try to validate first ) and misconduct between sellers,buyers,rentors,and leasers. Currently, motorcarmyanmar does not import, or export cars. It's primarily designed as an information sharing site and more pivoted toward ads, reviews and special offers.